[18 / 02 / 2020] Haydarpaşaသွေးစည်းညီညွတ်မှုသည် 422 Weeks ရထားဘူတာရှေ့တွင်လှုပ်ရှားနေသည်	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[18 / 02 / 2020] National Electric Train ၏ ဦး နှောက်နှင့်နှလုံးကို ASELSAN အားအပ်နှင်းထားသည်	54 Sakarya
[18 / 02 / 2020] ပါကစ္စတန်မီးရထားအကြားနားလည်ခြင်း၏တူရကီလက်မှတ်ထိုးစာချွန်လွှာနှင့်အတူ	92 ပါကစ္စတန်
[18 / 02 / 2020] Temsa တဖန်ရောင်း! ဒီတော့ဘယ်သူဝယ်မှာလဲ။	34 အစ္စတန်ဘူလ်
[18 / 02 / 2020] BergZTAŞITသည် Bergama တွင်ရှင်သန်လိမ့်မည်	35 Izmir
နေ့: ဇန်နဝါရီလ 19, 2020
Ordu Metropolitan မြူနီစီပယ်မြို့တော်အတွင်းအသွားအလာသိပ်သည်းဆကိုလျှော့ချရန်၎င်း၏အားထုတ်မှုကိုဆက်လက်။ Ordu Metropolitan မြူနီစီပယ်ကအစပျိုးအလုပ်၏အတိုင်းအတာအတွင်း, ချဲ့ထွင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်Altınorduခရိုင်အတွက်လမ်းဆုံမှာလုပ်ဆောင်လိမ့်မည်။ လေ့လာမှုများ, မြူနီစီပယ်၏နယ်ပယ်အတွင်း [ပို ... ]
Istanbul Okmeydanı Metrobus မတော်တဆမှု
Zincirlikuyu မှAvcılarသို့ metrobus သည်Okmeydanı stop ၏ရှေ့မှောက်တွင် metrobus ကိုနှိပ်ပါ။ Metrobus ကားမောင်းသူသည်မတော်တဆမှုတွင်ဒဏ်ရာရနေစဉ်ခရီးသည်များမှာအလွန်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
နိုင်ငံတော်သမ္မတ Recep Tayyip Erdogan ကတာဝန်ယူခဲ့သော Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Project ၏ပထမရထားလမ်းဂဟေဆော်ပွဲအခမ်းအနားတွင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာယနေ့ဝန်ကြီး Turhan သည် ၀ န်ကြီးဌာန၏မြို့ပြရထားလမ်းစနစ်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏ဥပမာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
တူရကီပြည်နယ်မီးရထား၏သမ္မတနိုင်ငံ (TCDD) စိတ်ကြိုက်င်း၏ web site ကိုအပေါ်တစ်ဦးကြေညာချက်ထဲမှာစွပ်စွဲချက်မှတုန့်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ကြေငြာချက်တွင်“ TCDD Tasimacilik AS ၏အများပြည်သူဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတာ ၀ န်သည်ယခုနှစ်အကုန်တွင်အဆုံးသတ်မည်။ [ပို ... ]
မနက်ဖြန်ကျင်းပမည့် Istanbul ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ
IMM Tourism Platform မှစီစဉ်သော“ ခရီးသွားလုပ်ငန်းအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ” ကိုမနက်ဖြန်ကျင်းပလိမ့်မည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် BBB ဥက္ကİ္ဌ Ekrem themamoğluသည်အကဲဖြတ်အစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်မည်ဖြစ်ပြီး Istanbul ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ Istanbul Metropolitan မြို့တော်ဝန် Ekrem amomamoğlu, 'Istanbul ၏ညွှန်ကြားမှုအောက်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည် [ပို ... ]
ကော်ပိုရိတ်ပြောင်းလဲခြင်းအကယ်ဒမီသည်ကော်ပိုရေးရှင်း၏ခိုင်မြဲမှုနှင့်သွက်လက်မှုတိုးတက်စေရန် ရည်ရွယ်၍ ကုမ္ပဏီများအားယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးလမ်းညွှန်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပေးအပ်ရန် ရည်ရွယ်၍ ထွက်ခွာခဲ့ပြီး၎င်း၏ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာဗိသုကာများနှင့်ကွဲပြားမှုကိုပြုလုပ်သောကြောင့် ၄ င်း၏စက်မှုလုပ်ငန်းခွဲဝေမှုအစည်းအဝေးများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်သည်။ [ပို ... ]
သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanသည်Eyüpsultanရှိ Gayrettepe Istanbul Airport metro စီမံကိန်း၏ပထမဆုံးရထားလမ်းဂဟေဆော်ခြင်းအခမ်းအနားသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ အခမ်းအနားတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားရာတွင်သမ္မတအာဒိုဂန်က "ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရဲ့အချက် (၄) ခုလုံးကိုမြန်နှုန်းမြင့်ရထားနဲ့ချိတ်ဆက်သွားမှာပါ" ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်သို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး [ပို ... ]
သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanသည် Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Project ပထမရထားလမ်းဂဟေဆော်ပွဲတွင်မိန့်ခွန်းပြောကြားသည်။ အာဒိုဂန်စီမံကိန်းမရှိအခါသမယဖြစ်စေလိုကြောင်း, သူတို့က, နောက်ဆုံး 17 နှစ်အကြီးဆုံးစီမံကိန်းများ၏သမိုင်းတွင်ဤစီမံကိန်းများကိုတူရကီနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ကြသည် [ပို ... ]
Gayrettepe-Istanbul Airport Metro Project ပထမရထားလမ်းဂဟေဆော်ပွဲအခမ်းအနားတွင်သမ္မတ Recep Tayyip Erdoğanကပြောကြားရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Canal Istanbul စီမံကိန်းကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်နောက်ကျနေပြီဟုပြောကြားခဲ့သည်။ Erdogan ကအောက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့သည် -“ ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှစ၍ Kanal Istanbul ကိုထပ်ခါတလဲလဲပြုလုပ်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Canam Istanbul မှ Imamoglu မှဖုန်းခေါ်ခြင်း - 'ဒီအမှားကနေပြန်လာ'
BBB ဥက္ကEk္ဌ Ekrem amomamoğluİYİပါတီမှစီစဉ်သော "Kanal Istanbul panel" နှင့်ဥက္ကဌ Meral Akşenerတွင်လည်းနားထောင်သူအဖြစ်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူကပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြခြင်းနှင့်အတူ, အမာကူက "ဒီကနေလူတိုင်းအားလုံးကို, တူရကီရှိအာဏာပိုင်များ, [ပို ... ]
Izmir မြို့ပြမြူနီစီပယ်၊ TARKEM နှင့် Izmir ဖောင်ဒေးရှင်းတို့၏ပူးပေါင်းမှုဖြင့်သမိုင်းကြောင်း Izmir လမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုယနေ့ကျင်းပခဲ့သည်။ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲမှရရှိသောရလဒ်များကိုသမိုင်းလမ်းကြောင်း၏စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းတွင်အထူးကျွမ်းကျင်သူအမည်များပါ ၀ င်သည်။ Izmir Metropolitan မြူနီစီပယ်, TARKEM [ပို ... ]
ယနေ့သမိုင်းတွင် - ၁၈၈၄ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ ၁၉ ရက် Mersin Adana မီးရထားလမ်းဖောက်ခြင်း
Mersin Adana မီးရထားလမ်း၏သမိုင်းအခမ်းအနားဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။ ၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီ ၁၉ တွင် Thessaloniki-Manastır Ottoman မီးရထားကုမ္ပဏီသည်ပြည်တွင်းစည်းမျဉ်းများကိုအတည်ပြုခြင်းဖြင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏မြို့တော်မှာရုံးချုပ်ဖြစ်သည်။ [ပို ... ]
Karakoyunlu တံတားအပြန်အလှန်နှင့် Viaduct အတွက်ကွန်ကရစ်သတ္တုများပုံသွန်း
အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယာဉ်များကို Ordu တွင်ပိုးကင်းသည်
Izmit ပင်လယ်ကွေ့ကိုညစ်ညမ်းစေသည့်သင်္ဘောအတွက် ၆၃၅ ထောင်ဒဏ်ငွေ
Haydarpaşaသွေးစည်းညီညွတ်မှုသည် 422 Weeks ရထားဘူတာရှေ့တွင်လှုပ်ရှားနေသည်
Temsa တဖန်ရောင်း! ဒီတော့ဘယ်သူဝယ်မှာလဲ။
İntekKalıp ve İskeleတန်ဇန်းနီးယားမီးရထားစီမံကိန်း၏အဖြေပါတနာဖြစ်လာသည်
RayHaber 18.02.2020 ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတင်းလွှာ
BergZTAŞITသည် Bergama တွင်ရှင်သန်လိမ့်မည်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: Firman နှင့်အတူဖေဖော်ဝါရီလ 18 1856